Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Declan Rice Oo Ugu Horeeya Saxiixa Manchester United, Raheem Sterling Oo Ku Biiraya Barcelona, Xaalada Paul Pogba, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Declan Rice oo ugu horeeya Saxiixa Manchester United, Raheem Sterling oo ku biiraya Barcelona, Xaalada Paul Pogba, iyo Qodobo kale
September 18, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester United ayaa mudnaanta koowaad ee suuqa kala iibsiga ka dhigtay Declan Rice oo ka tirsan West Ham xagaaga dambe. 22 jirka qadka dhexe ee England ayaa aad u doonaya inuu u dhaqaaqo Old Trafford wuxuuna ka careysnaa in qiimaynta Hammers ee £ 100m ay ka dhigtay inuu ka dhaqaaqo intii lagu jiray suuqa kala iibsiga ee ugu dambeeyay. (Independent)
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay la soo wareegto weeraryahanka reer England Raheem Sterling, oo 26 sanno jir ah, kaasoo amaah uga imaanaya Manchester City bisha Janaayo ka dib markii ay ku guuldarreysteen dalabkii ay ku keeni lahaayeen Nou Camp intii lagu jiray xagaaga. (Sport)
Wakiilka Paul Pogba Mino Raiola ayaa sheegay in 28 jirka reer France ee khadka dhexe uu dib ugu biiri karo Juventus marka uu dhammaado qandaraaskiisa Manchester United dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Corriere dello Sport)
Weeraryahanka Inter Miami Gonzalo Higuain ayaa sheegay in kooxda MLS ay leedahay hami ah inay la soo saxiixato saaxiibkiisa Argentina Lionel Messi marka uu qandaraaska Paris St-Germain ee 33 jirka ah dhacayo 2023. (ESPN)
Liverpool ayaa wadahadalo la furtay 26 jirka qadka dhexe ee reer Guinea Naby Keita si ay heshiis cusub uga saxiixato. Heshiiskiisa haatan wuxuu dhacayaa 2023. (Calciomercato)
Weeraryahanka reer Brazil Kayky, oo 18 jir ah, ayaa tababarka la bilaabay Manchester City ka dib markii ay horay uga soo wareegeen Fluminense, oo markii hore lagu waday in la dhammeeyo Janaayo. (Manchester Evening News)
Tottenham ayaa dib u soo cusbooneysiin karta xiisaha ay u qabto 28 jirka daafaca uga ciyaara Jarmalka Antonio Rudiger haddii uu ku guuldarreysto inuu heshiiska u kordhiyo Chelsea wixii ka dambeeya xagaaga dambe. (Express)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa sheegay inay jiraan “sababo badan” oo ah in Rudiger uu baxo laakiin daafaca dhexe uusan ku mashquulin wararka la isla dhexmarayo. (Dailymail)
Tuchel ayaa hoos u dhigay hadalkii ahaa in Chelsea ay isku dayday inay la soo saxiixato weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 28 jir ah, kana yimid Tottenham, laakiin wuxuu sheegay inuu filayay inuu ku biiri doono Manchester City .(Theguardian)
Garabka Chelsea ee Callum Hudson-Odoi, oo 20 jir ah, ayaa ka fikiraya inuu u beddelo qarankiiaa caalamiga ah ee England una wareego Ghana. (Dailymail)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in 30 jirka weerarka uga ciyaara France Alexandre Lacazette, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga soo socda, inuu ku jiro qorshihiisa isla markaana uu ka ciyaari doono qayb muhiim ah xilli ciyaareedkan. (Metro)
Tababaraha Netherlands Louis van Gaal ayaa ka reebay xiddiga qadka dhexe ee Manchester United Donny van de Beek, oo 24 jir ah, kulamadii kumeelgaarka ahaa ee bishii Oktoobar sabab la xiriirta waqti yar oo uu ku ciyaaro. (Manchester Evening News)
Daafaca reer Spain Sergi Roberto, oo 29 jir ah, ayaa qandaraas kordhin u saxiixi doona Barcelona isbuuca soo socda ka dib markii uu heshiis la gaaray madaxweynaha kooxda Joan Laporta. (Marca)
Juventus ayaa xiiseyneysa inay la soo wareegto weeraryahanka reer Serbia Luka Jovic, oo 23 jir ah, kaasoo amaah uga soo qaatay Real Madrid , laakiin kooxda La Liga ka dhisan ayaa doorbideysa inay iska iibiso. (Calciomercato)
Dani Alves, oo 38 jir ah, una dhashay Brazil, horena u ahaa Barcelona, ​​Juventus iyo Paris St-Germain, ayaa wadahadal la yeeshay Flamengo ka dib markii uu ka tagay Sao Paulo oo uu ka taagnaa muran dhanka mushaharka ah.(Torcedores)